UYILUNGISA NJANI IGOOGLE CHROME IYEKILE UKUSEBENZA WINDOWS 10, 8.1 KUNYE NE7 - ITHAMBILE
Uyilungisa njani iGoogle chrome iyekile ukusebenza windows 10, 8.1 kunye ne7
UGoogle Chrome sesona sikhangeli sisetyenziswayo sithandwa kakhulu ngenxa yojongano olusebenzisekayo olulula kakhulu, luyakwazi ukwenziwa, kwaye lukhawuleza. Kwaye uluhlu olubanzi lweeapps, izandiso ziyenza ibe nomdla ngakumbi. Kodwa ngamanye amaxesha izinto azihambi kakuhle njengoko abasebenzisi bexela Ukusetyenziswa kwe-CPU kaGoogle Chrome ephezulu , IChrome isebenza kancinane, Ukonakala kunye nezona zixhaphakileyo UGoogle Chrome uyekile ukusebenza .
Zininzi iindlela ezinokuthi zibangele ingxaki, ezinje ngokonakala kwi-cache yesikhangeli, iikuki, ufake inani lezandiso zebhrawuza ezinokuthi zibangele umba, njl njl. UGoogle Chrome uyekile ukusebenza kwiifestile 10, 8.1 kunye no-7.
UGoogle Chrome uyekile ukusebenza
Okokuqala, yiya ku C: Iifayile zeNkqubo (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe Cofa ekunene kwi-chrome.exe kwaye ukhethe iiPropati. Vula iThebhu yokuNhambelana kwaye yenza ukuba Sebenzisa le nkqubo kwimo ehambelanayo Windows 7 okanye 8! Ngoku vula isikhangeli seChrome oku kuyanceda.
Cima i-cache ye-chrome kunye nedatha yokukhangela
Kwikhompyuter yakho, vula IChrome .
Ekunene phezulu, cofa ngaphezulu izixhobo kwaye ukhethe Cacileyo idatha yokukhangela.
Okanye ungasebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo ctrl+shift+del
Phezulu, khetha uluhlu lwexesha. Ukuya cima yonke into, khetha lonke ixesha.
Ecaleni kweeKuki kunye nezinye iinkcukacha zesayithi kunye Igciniwe imifanekiso kunye neefayile, khangela iibhokisi.
Cofa Cacileyo idatha.
Khangela iSoftware eNgqubayo
UGoogle Chrome ubonelela ngesilungisi engxakini ukubona into ebangele ukuba iGoogle Chrome iyeke ukusebenza impazamo.
Vula i IChrome umkhangeli zincwadi
Uhlobo chrome://iingxabano kwibar ye-URL
Cofa i Ngena isitshixo
Uluhlu lwesoftware ephikisanayo luyaboniswa
Nje ukuba uchonge isoftware ephikisanayo, unokukhetha ukuyikhupha usebenzisa i Useto> Ii-Apps> Khipha indlela.
Hlaziya isikhangeli seChrome
Ukuba awunayo nayiphi na isoftware ephikisanayo, iChrome icebisa ukuba ufakele uhlaziyo. Ukufakela uhlaziyo kwiChrome,
Vula isikhangeli seChrome
chwetheza i-chrome://isetingi/uncedo kwaye ucofe iqhosha lokungena.
Oku kuya kukhangela ngokuzenzekelayo kwaye kufake uhlaziyo lwamva nje
Vula kwakhona umkhangeli zincwadi, Kwaye khangela kuyanceda
Susa izandiso kunye neeApps kwiChrome
Esi sesinye isisombululo esisebenzayo, ubukhulu becala ukulungisa iingxaki ezinxulumene nesikhangeli se-chrome ziquka uGoogle Chrome uyekile ukusebenza
Ukususa izandiso zechrome
Uhlobo chrome://izandiso/ kwibar yedilesi (URL bar)
Ngoku, uya kubona zonke izandiso kwifom yephaneli
Ungacofa apha ' Susa ' ukuzikhupha
Unga guqula ulwandiso icimile ukuyivala
Ukususa usetyenziso lweChrome
Qalisa i IChrome umkhangeli zincwadi
Ngenisa okubhaliweyo kulandelayo kwidilesi/ibha ye-URL
Bhrawuza kuluhlu losetyenziso
Cofa ekunene kwezo ufuna ukuzisusa
Cofa apha ' Susa kwiChrome '
Emva koko qalisa kwakhona isikhangeli sewebhu kwaye ujonge ukuba iyanceda.
Seta kwakhona isikhangeli seChrome kuSeto oluMiselweyo
Le yenye indlela esebenzayo yokulungisa Ukuba ufumana ukusebenza kancinci okanye iChrome iyasebenza, iyantlitheka, kwaye ivale ngokuzenzekelayo. vula ngokulula uhlobo lwesikhangeli sewebhu se-chrome chrome://isetingi/ukusetha kwakhona kwaye ucofe iqhosha lokungena. Nqakraza ku Buyisela useto kwizinto ezingagqibekanga. Emva koko ufunde ingcaciso malunga nenkqubo yokusetha kwakhona kwaye Cofa i Hlela kwakhona iqhosha.
Nje ukuba ugqibezele amanyathelo, uGoogle Chrome uya kubuyisela useto olungagqibekanga, khubaza izandiso, cima idatha egciniweyo njengekuki, kodwa iibhukhimakhi zakho, imbali, kunye neepassword ziya kugcinwa. Masiphinde sivule isikhangeli kwaye sijonge ukuba akukho ngxaki.
Cima Isiqulathi seefayili Ezikhethwayo
Unokucima kwakhona ifolda yokuKhethayo ukubona ukuba idatha egciniweyo yeChrome ayibangeli le mpazamo. Kwiimeko ezimbalwa, i UGoogle Chrome uyekile ukusebenza impazamo ngaphakathi Windows 10 isonjululwa ngolu lungiso.
Cofa iqhosha leWindows + R kwaye ukope oku kulandelayo kwibhokisi yencoko yababini kwaye ucinezele iqhosha lokungena:
%USERPROFILE%Useto lweNdawoIDatha yeSicelouGoogleChromeIdatha yoMsebenzisi
Cofa kabini kwi- Ukuhlala kukho incwadi yokuyivula kwaye ujonge ifayile ebizwa ngokuba ' Ezikhethwayo ' Cofa nje ekunene kuyo kwaye ukhethe Cima.
Qaphela: Phambi kokucima ikopi yefayile kwaye uncamathisele ifayile efanayo kwidesktop ngeenjongo zokugcina. Ungayiqala kwakhona iChrome ukujonga ukuba oku kuwusombulule umcimbi okanye hayi.
Kwakhona, inani labasebenzisi lixela ukuthiya ngokutsha ifolda engagqibekanga ibancede basombulule ingxaki uGoogle Chrome uyekile ukusebenza ukwenza oku kuqala ukuvala isikhangeli sewebhu sechrome (ukuba iyasebenza) emva koko ucinezele windows + R, chwetheza le dilesi ilandelayo Vula ibhokisi yencoko yababini kwaye kulungile.
% LOCALAPPDATA% Google Chrome Idatha yomsebenzisi
Apha khangela isiqulathi seefayili esinegama loSimiyo, cofa-ekunene kuso kwaye uyithiye ngokutsha njenge-default.backup. yonke loo nto ivale ifolda kwaye uqalise kwakhona iChrome kwaye ujonge ukuba iGoogle Chrome iyekile ukusebenza impazamo ibonakala okanye hayi.
Ukuba akukho nto isebenzayo, phinda ufake iChrome
Nasiphi na kwezi zisombululo zingasentla aziyilungisanga ingxaki, zama ukufaka kwakhona uGoogle Chrome.
Cofa kwi Windows 10 Qala imenyu
Yiya kwi Iisetingi ifestile ngokunqakraza kwi uphawu lwegiya
Yiya kwi Usetyenziso amacandelo
Khangela kwi ugoogle Chrome kwaye ucofe kuyo
Khetha ' Khipha ' kwaye ugqibezele inkqubo
Ngoku, cofa kwi- ikhonkco ngezantsi ukuya Khuphela uGoogle Chrome cwangcisa ifayile
Qalisa ukuseta kwaye ulandele imiyalelo evezwe yiwizadi yofakelo lweChrome Emva kokuba uphinde ufake iGoogle Chrome ngempumelelo, akuyi kubakho mpazamo yeGoogle Chrome.
Kwakhona ngamanye amaxesha ezonakalisiweyo iifayile zenkqubo zikwabangela ukuba usetyenziso luyekile ukusebenza lubandakanya uGoogle Chrome uyekile ukusebenza inkqubo yefayile yokukhangela into eluncedo ekhangela iifayile zenkqubo ezonakeleyo ezilahlekileyo ukuba ifunyenwe nayiphi na into eluncedo yesfc izibuyisele ngokuzenzekelayo kulawulo olucinezelweyo olubekwe kwi% WinDir%System32dllcache.
Ngaba ezi zisombululo zanceda ukulungisa UGoogle Chrome uyekile ukusebenza kwiifestile 10, 8.1, kunye no-7? Sazise ukuba yeyiphi inketho esebenzele wena ufunde
Lungisa iseva ye-DNS engaphenduli Impazamo Windows 10
Lungisa umthamo wokuqalisa onganyukiyo windows 10 Isikrini esiBlue SIMA: 0x000000ED
I-WiFi iqhagamshelwe kodwa akukho UFikelelo lwe-intanethi Windows 10 (ulungiso olusebenzayo olu-5)
Isonjululwe: Err_Connection_Timed_Out Imposiso ingxaki kuGoogle Chrome